‘समाचार सुनेपछि शून्य भएँ’ - जम्काभेट - साप्ताहिक
‘समाचार सुनेपछि शून्य भएँ’
- सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ
सन् १९७९ मा बौद्धमा जन्मिएका मनोज सिंह अहिले मनोज नेवाको नामले परिचित छन् । आठ वर्षको उमेरदेखि बाँसुरी बजाउँदै आएका उनी ३३ वर्षको निरन्तरतापछि ग्रामी एवार्डका लागि मनोनयनमा पर्ने पहिलो संगीत साधक बनेका छन् । संगीतका लागि विश्वकै सर्वोच्च पुरस्कार मानिने ग्रामी एवार्डमा नेपाली संलग्नता संगीत सिर्जना मनोनयनमा परेको यस एल्बममा गायत्री मन्त्रको भक्ति संगीत सुन्न पाइन्छ । मनोज डेढ दशकभन्दा अघिदेखि अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा बस्दै आएका छन् । नेपालमा रहँदा सुकर्म समूह, १९७४ एडी ब्याण्डसँग बाँसुरीवादकका रूपमा संलग्न थिए, उनी । साप्ताहिकका लागि सिर्जना दुवाल श्रेष्ठले गरेको अनलाइन कुराकानी :
ग्रामी एवार्डको मनोनयनको समाचार सुनेपछि कस्तो अनुभव भयो ?
मलाई देवा र मिनेटले फोन गरेर हामी ग्रामीमा मनोनयन भयौं भनेर सुनाएका थिए । एकपटक त मलाई सपना झैं लाग्यो । विश्वका हरेक संगीतज्ञको सपना हो, ग्रामी । समाचार सुनेपछि एकछिन त शून्य भएँ । त्यसपछि मैले सानैदेखि बजाउने किराँतेश्वर संगीत आश्रमको मञ्चलाई सम्झेँ ।
ग्रामी एवार्ड पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
मैले कहिले पनि पुरस्कार, सम्मानका लागि संगीतलाई सोचिन । यो एवार्ड पायो भने नेपाली संगीत पनि ग्रामीसम्म पुग्यो भनेर खुसी हुन्छु । नपाउँदा पनि अझैं राम्रो बजाउने कोसिसमा रहनेछु । ग्रामी एवार्डमार्फत धेरै माझ म क्लिक भएँ । यसैमा दंग छु ।
कसरी ग्रामी एवार्डको मनोनयनसम्म पुग्नुभयो ?
जर्मनीकी देवा प्रेमल र बेलायतका मिटेनसँगको संयुक्त एल्बम ‘देवा’ का लागि ग्रामीको ‘बेस्ट न्यू एज एल्बम’ विधामा छानिएको हो । हामी तीन जनाको संयुक्त सहकार्य नै यसको हकदार हो ।
देवा प्रेमल र मिटेनसँग लामो सांगीतिक यात्रा गरिरहनुभएको छ । तपाईंहरूको पूर्वीय र पश्चिमी केमेस्ट्री कसरी जम्यो ?
अमेरिका गएदेखि बाँसुरीवादनलाई निरन्तरता दिइरहेँ । यसै क्रममा मलाई सान फ्रान्सिस्कोका धेरै ठाउँबाट बासुरी बजाउन निम्तो आउन थाल्यो । सांगीतिक कार्यक्रमकै सिलसिलामा देवा र मिटेनसँग भेट भएको हो । उनीहरूमा पूर्वीय दर्शनप्रति प्रेम र आस्था थियो । उनीहरूले आध्यात्मिक भावले गाएको गीत र मन्त्रले मलाई तान्यो । देवा र मिनटलाई चाहिँ मेरो बाँसुरीको धुन कृष्णको धुनजस्तो मीठो लागेको बताउँदै हाम्रो सामीप्यता बढ्यो र सहकार्य हुन थाल्यो । यो सहकार्य पनि १५ वर्ष भइसकेको छ । उनीहरूमा पूर्वीय दर्शन, चिन्तन यति छ कि मैले बजाउने बाँसुरीसँग ऊर्जात्मक केमेस्ट्री मिलेको अनुभव हुन्छ । यही ऊर्जात्मक केमेस्ट्रीकै परिणाम हो, यस पटकको ग्रामी एवार्डमा मनोनयनमा पर्नु ।
यस एल्बममा खास कुन खुराक छ जसले यो सफलता हासिल गर्‍यो ?
आध्यात्मिक र संगीतलाई साधना र पूजाका रूपमा हाम्रो प्रस्तुति नै यसको खुराक भन्न मिल्छ होला । यो एल्बम गायत्री मन्त्रको भक्तिसंगीत हो ।
सफल हुनुको कारण के ठान्नुहुन्छ ?
म अमेरिकामा बस्न थालेपछि मनमा एउटै कुरा खेलिरहन्थ्यो । नेपालमा भन्दा म यहाँबाट नेपाली धर्म, संस्कृति र संगीतमा योगदान दिन सक्छु । मलाई पहिलेदेखि लाग्थ्यो संगीत एउटा यस्तो माध्यम हो जसको लागि भूगोलको सीमाले न छेक्छ, न कुनै भाषा, धर्म, संस्कृति र जातकै सीमाभित्र रहन्छ । त्यही भएर मैले अमेरिकामा रहेर नेपाली संगीतलाई नै प्राथमिकता दिँदै लगेँ । साथै मेरो, देवा र मिनटको समूहको निरन्तरता पनि हो । हाम्रो यो सातौं एल्बम हो । जसबाट हामी सफल भएको महसुस हुन थाल्यो ।
नेपाली संगीत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो ?
भारतमै गौण रूपमा पाएको यो एवार्ड नेपालीले पाउँछ भन्ने सोचसमेत राखिएको पाइँदैन तर नेपालको संगीत त्यसमा पनि शास्त्रीय संगीत र वाद्यवादकको कुरा गर्नुपर्दा सक्षम कलाकारहरू धेरै छन् तर पहुँचको कमी जस्तो लाग्छ । संगीतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अमेरिका बसाइ कति उपलब्धिमूलक छ ?
अमेरिकामा सबै देशका संस्कृति छन् र ती सबैलाई सम्मान पनि गरिन्छ । भारतका वरिष्ठ स्रस्टाहरू जाकिर हुसैन, रविशंकरले पनि अमेरिकाबाटै संघर्ष गरे । यहाँ राम्रो र असल चिजको सम्मान हुने रहेछ भन्ने बुझेँ ।
घोषणा महत्त्वाकांक्षी काम शून्य
बिहानै नकारात्मक समाचार सुन्दा कस्तो लाग्छ?
शून्य डिग्रीमा हिमाल आरोहणको प्रशिक्षण
सुमित पाठकको समाचार सार्वजनिक
निर्णायकको प्रसंसाले उत्साहित भएँ
जीवनसाथी रोजिसकेको छु भाद्र २५, २०७६
एक्टिङ मेरो सोख हो भाद्र ११, २०७६
एउटा भिन्न कलामा सन्नी श्रावण २९, २०७६